Soviet ezicitshwayo ballistic, athuthukiswe futhi kwemukelwe isevisi emuva kwamashumi amahlanu, umyalo okhathazekile buholi betepolitiki amazwe aseNtshonalanga namuhla. Kusasele amashumi eminyaka baye badlula, ngesikhathi kwethulwa amasayithi eside kusukela kuthathwe indawo yezinye, izinhlelo zamuva, amasha athuthukile kanye abezindaba siqhubeke ngegama elithi "Scud".
Rocket R-11 "Elbrus" uqala ngempumelelo ngo-1953, iSoviet amabutho ahlomile wathola ke ngo-1957. Ngokwezindinganiso zanamuhla, kuba kudivayisi silula, ingxenye ikhanda akuyona ahlukaniswe, amadivaysi control ibekwe phakathi oxidizer nophethiloli amathangi. Ukunemba contact ayiyinhle, okuyinto ngokwengxenye inxeshezelwa enamandla icala obhubhisayo ngalolo uphethiloli unburned ukuthi adale yesiteleka umphumela.
Ngokushesha lezi zikhali lithole uphawu SS-1, NATO, noma "Scud". Missile wakhululwa emazweni ukuthi ekuqa- 50s kanye 60s babebhekwa njengabangakufanelekeli friendly ngisho ahlangene. Iran, e-Iraq, Egypt, North Korea, Syria, Libya, ukuthola izindaba ngesikhathi izikhali baye baba abanikazi i-agumenti ezinzima izingxabano nomakhelwane balo. Bobabili Yemen (amazwekazi aseNyakatho naseNingizimu) esingu nomunye Soviet P-17 no-P-11. Ngaphezu kwalokho, izisebenzi ubunjiniyela, kanye baqeqeshelwa iningi emayunivesithi Soviet, sebeqale nesimanje, ukuthuthukisa kanye zicinge yokuhlela ukukhiqizwa kwe amasampula efanayo siqu.
Uyini umbono wesabeka kangaka ukuthi ubudala futhi abangaphelele "Scud"? Rocket usuthandwa ngakho emazweni abangenawo onekusasa zesayensi kanye lobuchwepheshe ngenxa yezizathu ezimbili eziyinhloko.
Eyokuqala yalezi kuyisici sobuntu zonke Soviet imishini ukulwa malula futsi nokwethenjelwa. Ukuze uqonde amalungiselelo yesifunda main ayengakwenza isizwe kweNyakatho Korea amaKhomanisi Fundamentalist Iranian futhi nabaseGibithe. Kodwa lokhu akulwenzi lwaluvelele.
Bambalwa kakhulu emhlabeni yezikhali yesimanje ukuthi kungaba onezimfihlo ngakho njengoba "Scud". Missile wenziwa emsamo, bakuthola kunzima, futhi kunzima nakakhulu ukuceka. Phakathi "Operation Ugwadule Storm" naphezu kwempatho ukubusa obuqand indiza US Air Force, abakwazanga ukuba achithe umhlaba nganoma isiphi esinye iziqhumane. On isimo ukucabhela kwaba ungcono Okuqondiwe flying, kodwa hhayi kakhulu. Izakhiwo "Patriot" bekhathazekile zonke missile yesihlanu, lonke waya cordons missile Israeli, Saudi Arabia kanye Bahrain. Indlela esebenzayo ukuze kuqinisekiswe kokubhujiswa 'Scud "okwamanje zikhona.
Ukuze sizuze missile ubuchwepheshe bavame uthi hhayi kuphela elinamandla ezithi ubuholi yesifunda, kodwa futhi izinhlangano amaphekula. Ngemva ukuhoxiswa amabutho aseSoviet kusukela e-Afghanistan, kwamabutho kahulumeni yezwe Uthole izakhiwo eziningana "Elbrus". Taliban ashaqe isikhali. Isiphelo sakhe ayaziwa, kodwa isibhamu laseChekhov sika, R-17 missile ongaxoshwa kanye ezaziwayo. Ngiyiphi inarha lapha okuzokwenzeka, abayoba ucindezela inkinobho "isiqalo": AmaSeparatist Kurdish, Al-Qaeda fighter noma mujahideen Afghan?
Ukusetshenziswa ibutho Russian kwesokunxele "Scud" nge yisikhathi ukuphila eshalofini empini e Chechnya wabonisa ukuthembeka omkhulu ubuchwepheshe elidala Soviet. Kwakungekho ukwehluleka olulodwa.
Dynamite - kuyinto okusunguliwe Alfreda Nobelya
France ngemvume umthetho onqabela ezifanelekayo ukufuya imikhomo namahlengethwa basekuthunjweni